Gbasara Anyị | Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd.
Principlekpụrụ anyị: Ogo nke mbụ, ọnụahịa ka mma, Ọrụ Ndị Ọrụ
Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, hiwere na 2013, nke dị na Zhangjiagang obodo, bụ ọkachamara na ịmị ma na-ere site na ire ọkụ ọkụ na plasticizer, PU elastomer na Ethyl Silicate. Anyị na ngwaahịa na ọtụtụ-eji ịkwanyere, Pu ụfụfụ, ịgba polyurea waterproof ihe, thermal iche iche ihe, nyagide, coatings na rubbers wdg Anyị guzobere anọ OEM osisi na Liaoning, Jiangsu, Tianjin, Hebei & Guangdong n'ógbè. Ihe magburu onwe ụlọ ọrụ mmepụta ihe ngosi na mmepụta akara na-eme ka anyị dakọtara niile ahịa 'ahaziri ina. Factlọ ọrụ niile na-agbaso ụkpụrụ gburugburu ebe obibi ọhụrụ, nchekwa na ọrụ nke na-echekwa nkwado anyị. Anyị arụchaala EU iru, Korea K-iru zuru ndebanye na Turkey KKDIK tupu ndebanye maka anyị isi ngwaahịa.
Ike imeputa anyi kwa afo kariri 20,000tons. 70% nke ike anyị na-ebupụ ụwa niile na Asia, Europe, North America, Middle East, S. America wdg. Uru mbupụ kwa afọ anyị karịrị nde $ 16. Dabere na ọhụrụ na ọkachamara ọrụ, anyị hụ na-enye ruru eru na asọmpi ngwaahịa niile ahịa anyị.
Anyị nwere ọkachamara management otu na technicians nwere ihe karịrị 10 afọ ahụmahụ na ubi nke ezi Chemicals iji nye mma oru ọrụ. Anyị onwe anyị lọjistik ụlọ ọrụ na-eme ka anyị na-enye mma ngwọta nke logistic ọrụ na-azọpụta na-eri maka ahịa.
Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd nwere ike oru otu na ụlọ ọrụ, ọtụtụ iri afọ nke ọkachamara ahụmahụ, magburu onwe imewe larịị, na-eke a elu-edu elu-arụmọrụ nwere ọgụgụ isi equipment.We eji elu imewe usoro na ojiji nke elu ISO9001 mba quality management usoro management.Our ụlọ ọrụ specializes na-amị elu-arụmọrụ akụrụngwa, ike oru ike, ike mmepe ike, ezi oru services.We-anọgidesi ike na àgwà nke ngwaahịa na-achịkwa nditịm na-amị Filiks, mere ka imewe nke niile types.Whether ọ bụ tupu -ihe ma ọ bụ mgbe erechara, anyị ga-enye gị ọrụ kachasị mma iji mee ka ị mara ma jiri ngwaahịa anyị ngwa ngwa.
Nkwupụta Ngwaahịa Ngwaahịa
De-airing / leveling gị n'ụlọnga na ala Polish, akpụkpọ anụ na mgbidi coatings
Defoamer na ihe na-egwu mmanụ
Elastomer na PU; na-agwọ ọrịa gị n'ụlọnga na Polyurea & epoxy resinU
Elastomer na PU; na-agwọ ọrịa gị n'ụlọnga na Polyurea & epoxy resin
Ọkụ ire ọkụ na PU isiike ụfụfụ na thermoplastics
Triethyl fosfeti (TEP)
Ire ọkụ retardancy na thermosets, PITA & Pu isiike isiike
Ọkụ ire ọkụ na phenolic resin na polyvinyl chloride
Ihe mgbochi agba maka eriri na polymer ndị ọzọ; Onye na-ewepụta ihe na pesticides & pharmaceuticals
Anti-eyi gị n'ụlọnga ke nitrocellulose lacquers na mmanu mmanu
Ọkụ ire ọkụ na roba, PVC na eriri
Ire ọkụ retardant na ịkwanyere resin, epoxy resin, phenolic resin and Pu
Ire ọkụ na cellulose nitrate / acetate na vinyl resin
Ihe nkedo na eserese ihe na-emebi emebi na nkenke nkedo